धरान । मोरङको उत्तरी भेगमा पर्ने केराबारी गाउँपालिका ग्रामीण भेगमा पर्ने दुरगम तर संभावना वोकेको गाउपालिका हो । अर्थात विकासमा निकै पछाडि परेको छ तर यहाँको कृषि पर्यटनले निकट भविष्यमा नै विकासले फड्को मार्ने संभावना समेत वोकेको छ । यो गाँउपालिकालको कुल क्षेत्रफल २१९.८३ वर्ग किलोमिटर रहेको छ।
यहाँको भौगोलिक विकटताकै कारणले विकासले गति लिन नसकेको हो । मुलुक संघीयतामा गएर पुर्नसंरचनामा गएपछि साविकको याङ्शिला, केराबारी, भोगटेनी, सिंहदेवी र पाटीगाउँ गाविस समायोजना भएर केराबारी गाउँपालिका भएको हो । भौगोलिक विकटता र दुर दराजको क्षेत्र भएर पनि मोरङ जिल्लाकै सवै भन्दा संभावना वोकेको गाउपालिका पनि हो । उत्तरमा धनकुटाको साँगुरीगढी र चौबिसे गाउँपालिका, दक्षिणतर्फ सुन्दरहरैँचा र बेलबारी नगरपालिका, पश्चिमतर्फ सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका र पूर्वतर्फ लेटाङ नगरपालिकाहरु छिमेकी स्थानीय तहहरु हुन् । विकासको दृष्टिले पछि परेको तर संभावना वोकेको केराबारी गाउपालिकाका अध्यक्ष रोहित बहादुर कार्कीलाई गाँउपालिकाको विकास र योजना के–के छन त भनेर सोधेका छौं :–
१, तपाई केराबारी गाउपालिकाको अध्यक्ष सम्म कसरी आउन सफल हुनु भयो ?
:– मेरो यात्रा राजनीतिको यात्राबाटै आएको हो । यो यात्राबाटै चुनाबवाट जनताले चुनेर यहाँ सम्म अध्यक्ष जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर दिएका छन् । अहिले जनताको विचमा काम गरिरहेको छु ।
२, अहिले जनताको विचमा काम गर्दै हुनु हुन्छ के अन्तर रहेछ नेता हुनु र जनताको सेवक भएर काम गर्दा, कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ ?
:– हैन यो राजनीति भन्ने कुरा राजनीतिसँगै संवन्धित हुने तर त्यो पनि जनताकै लागि हो । तर राजनीति विचारबाट गर्ने हो भने समाजिक काम गर्दा दायित्व वढी हुन्छ । जनताको काम बौदिकताबाट गर्नु पर्छ जिम्मेवारी उतिकै हुन्छ ।
३,नेतृत्व फरक फरक आस्थाबाट गर्नु भएको छ, सहजता छ काम गनुर््लाई ?
:– म काँग्रेसबाट जनताले निर्वाचित गराएका छन् । उापध्याक्ष फरक आस्था नेकपाबाट विजयी भएर आउनु भएको छ । फरक आस्था र भएपनि विकासमा फरक मत वनाउनु हुदैन । एक मतका साथ अघि वढ्नु पर्छ । आस्था फरक भएतापनि जनताको सेवा र विकास नै पहिलो कर्तव्य हो । केराबारी गाउपालिकाले जनताले यस्तो जिम्मेवारी दिएका छन्। ५ वटा वडा काँग्रेसले जितेको छ भने अलि वढी बहुमत नेकपाको रहेछ । जनताले मिलाएर जिम्मेवारी दिएका छन् । जनताले दिएको जिम्मेवारी हामी पुरा गर्छौ।
३. मतभेद त हुन्छ कहिलेकाँहि ?
:– मत भेद हुदैन यहाँ । अरु पालिकामा मतभेद भएको सुन्नु भएको होला । तर यहाँ त्यस्तो छैन । त्यो एउटा सफल ड्राइभिङ गर्ने र कुशल नेतृत्वको कारण पनि मतभेद भएको छैन। यहाँ उपाध्यक्ष सहित आस्था फरक राख्ने जनप्रतिनिधी हुनु हुन्छ तर हामीले केराबारीको विकास र योजना कार्यान्वयन गर्न कहिल्यै रस्साकस्सी गर्नु परेको छैन । यसको मतलव नेतृत्वको कार्यकुशलता पनि होला ।
४, खदम खोलामा वर्षौदेखि पुल वन्न नसकेका कारण वर्षेनी धनजनको क्षति हुन्छ,कहिले वन्छ खोलामा पुल ?
:– मेरो निर्वाचन ताका प्रमुख विषय नै यही थियो । खदम खोलामा पुल लगाएर वर्षौखदेखिको समस्याबाट यहाँका जनतालाई मुतिm दिलाउने भनेर प्रतिवद्धता नै गरेको थिए । जनतालाई आस्वासन दिएको थिए । यो खदम खोलामा पुल हालेर धरान र लेटाङलाई सिधा जोड्ने चुनाबी एजेण्डा नै लिएर जनताको घरदैलोमा गएको हो । वाँकी खोलाहरुमा पनि पुल पुलेसा वनाउने लक्ष्य लिएको छु । तर मैले केराबारी गाउपालिकामा जिते पनि मेरो दलले प्रदेश र संघमा जित्न सकेन । त्यसकारणले पनि मैले अहिले त्यहाँ पुल लगाउनु नसकेपनि अहिले अरु प्रतिवद्धता गरेको हिसावले पुल वाहेक सवै प्रतिवद्धताहरु पुरा गरेको छु ।
५, तर विकास त दलको होइन , यो त जनताको विकास हो नी ?
:– तपाईले ठिकै भन्नु भयो ।अहिले धरानबाट चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्ग झापाको वाहँनडागी सम्म यो हाइवे वन्दैछ । यो आयोजनाले सम्पुर्ण कामलाई हाम्रो गाउपालिकालाई सहयोग गर्दछ । मदन राजमार्ग अन्र्तगतको खदमखोलामा पुल वनाउनको लागि त्यसको डिपीआर हुदैंछ ।अव यो आयोजना २,३ वर्षमा पुरा होला । तर यदि मलाई काम गर्न मिलेको भए एक वर्ष अघि म पुल निर्माणको काम शुरु गर्ने थिए ।
६,भनेपछि केन्द्र , प्रदेशमा नेकपाको वहुमतको सरकार छ , तपाईलाई फरक आस्थाको कारण पुल वनाउन गाह्रो भयो ?
:– हैन । मैले जुन स्पीडमा जनतासँग प्रतिवद्धता गरेको थिएँ ,त्यो भएन । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि गाउँपालिकाले गरेको निर्णयलाई सहयोग गरेको छ । अहिलेको सरकारले पनि त्यो कुरालाई वुझेर गाउपालिकाको निर्णयलाई फलो गरेर अहिले लेटाङदेखि पारी पटि भलुवाखोला २,४ वटा खोलामा १ नम्बर क्षेत्रमा ६ वटा पुलका लागि हाम्रो ठेक्कापट्टा परेको छ । तर मैले जनता समक्ष जुन कुरा वोलेको थिएँ, त्यो मेरो क्षमताले भ्याएन ।
माथिको सरकारलाई मैले दलको हिसावले कुरा गर्दा मेरो कुरा नविक्न सक्थ्यो, यर्थाथ हो । तर मदन भण्डारी राजमार्गले राष्ट्रिय माग छ ,त्यसले खदम खोलालाई संवोधन ग¥यो । मैले यो अवधिमा डाँगीबाट आर्मी क्याम हुदै चोक्टी सम्म जोड्नको लागि ५ किलोमीटर कालोपत्रे हुँदैछ । ५ करोडको लागतमा काम भइरहेको छ । यसकारण मैले पनि पुर्वाधारको काम त गर्दैछु । तर खदम खोलाको सन्दर्भमा गाँउपालिकाले सानो वजेटले हुँदैन ।
ठु्लो लागत स्टेमेट लाग्ने हुनाले हामी प्रदेश सरकारसँग पनि डेलिकेशन जाने तयारी गर्दैथियौं तर संयोजवस राष्ट्रिय राजमार्ग मदन भण्डारीले हाम्रो समस्याको समाधान लागि वाटो खोलिदियो । भाग्यवस मदनभण्डारी राजमागले पुल वनाउनका लागि अहिले खदम खोलामा डिपीआर हुँदैछ । राष्ट्रिय राजमार्ग अन्र्तगत सायद यो ३ वर्षभित्रमा पुल वन्ने छ । चाहे त्यो संघीय सरकारको होस या गाउपालिकाले त्यो हाम्रो आवश्यकता हो , त्यो आवश्वकता सायद हाम्रो आवाजलाई पनि संघीय सरकारले पुरा गरेको हुन सक्छ । अव हामी स्थानीय सरकारको हैसियतले आयोजना पुरा गर्न साथ र सहयोग हुने छ । पुल वन्छ भन्ने आशा छ। जनताले अव पुल नभएको कारण सास्ती पाउनु पर्ने स्थिती आउँदैन । यो आयोजनाले पुरा गर्छ र गर्नु पर्छ ।
७, गाउपालिकाको विकासलाई अहिले सम्म के – के गर्नु भएको छ त ?
:– म यो तीन वर्षको अवधीमा मैले गरेका कामहरु सर–सर्ती भन्न चाहन्छु । मैले गाउपालिकामा पहिलो वर्ष स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छु । १० वटै वडामा जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउनको लागि स्वास्थ्यकर्मी सहित स्वास्थ्य चौकी खडा गरेका छौ ।
यो पहिलो वर्षमा भएको हो । अहिले १० वटै वडामा जनतालाई स्वास्थ्य पहँुच र सुविधा पु¥याउनका लागि सेवाहरु हरेक वडामा सन्चालनमा रहेका छन् ।साथै जनताको लागि स्वास्थ्य उपचार गर्न सहज वनाउनका लागि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सँग सँगै अघि वढाएका छौं । र हामीले केराबारीमा पालिका स्तरीय एमविविएस डाक्टर राखेर सेवा शुरु गरिरहेका छौं ।
म आइसकेपछि यस्तो भएको हो । पर्यटकीय क्षेत्रका लागि संभावना वोकेको सप्तकन्या गुफा, याङशिला तथा ओख्रे भ्यु टावर जेफाले भ्यु टावर, सिंहदेवी, महादेव पार्वती गुफा, पाटी, स्थलहरु हुन् ।सडक, पानी बिजुली र सञ्चारको पहुँच पुग्दैछ। हामीले खानेपानी नभएका स्थानमा शुद्ध खानेपानी पु¥याइ सकेका छौं।
जनप्रतिनिधी नहँदा धुलोबाटो हिड्ने स्थानमा ग्राभेल भएको छ। ग्राभेल भइसकेको बाटो पिच हुने क्रममा छ। पूर्वाधार विकासतर्फ सडक कालोपत्रे, स्तरोन्नति, खानेपानी तथा सरसफाइ सिँचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, बजार व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपालन, विद्यालय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई फोकस गरेका छौ पर्यटन प्रवद्र्धन तथा लक्षित वर्गलाई समेत विकासको मूलप्रवाहमा ल्याएका छौं महिला सशक्तिकरण ,बालबावालिकाको लागि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौ । यसरी हामी केराबारी गाउपालिकालाई सवैको सहयोग र सल्लाह सुझाबवाटै यहाँको विकास जनताको आवस्यकता अनुसार मागलाई संवोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यतm गर्दछु ।